Ny famoahana CO2 dia voamarika any amin'ny faritra maina izay misy fiantraikany amin'ny tsingerin'ny karbaona | Fanavaozana maintso
Ny famoahana CO2 dia voamarika any amin'ny faritra maina izay misy fiantraikany amin'ny tsingerin'ny karbaona
Portillo Alemanina | | Sambory co2, Tontolo_iainana
Nandritra ny folo taona lasa, misy fikarohana marobe mifantoka amin'ny fifanakalozana entona entona misy eo amin'ny atmosfera sy ny biosfera. Amin'ireo entona be mpandinika indrindra dia misy foana ny CO2 voalohany satria io no mampitombo ny fifantohany indrindra ary mampitombo ny hafanan'ny planeta.
Ny ampahatelon'ny famoahana CO2 vokatry ny asan'olombelona dia tototry ny ekosistia terrestrial. Ohatra, ala, ala tropikaly, tany mando ary tontolo iainana hafa no mandray CO2 entin'ny olombelona. Na dia toa tsy toa izany aza, tany efitra sy tundras koa manao.
1 Ny fifandraisana misy eo amin'ny rivotra sy ny rivotra iainana
2 Ilay tranokala fanandramana ao Cabo de Gata
Ny fifandraisana misy eo amin'ny rivotra sy ny rivotra iainana
Ny andraikitry ny faritra karakaina toa ny tany efitra, dia tsy noraharahain'ny fiarahamonina siantifika na dia vao haingana aza, na dia misy aza ny fanadihadiana mampiseho fa izy ireo dia misy akony lehibe amin'ny fandanjana ny karbaona manerantany.
Ny fandinihana ankehitriny dia naneho ny maha-zava-dehibe ny fidiran'ny rivotra ambanin'ny tany entin'ny rivotra, dingana iray izay tsy jerena matetika izay misy ny famoahana ny rivotra feno CO2 avy any ambanin'ny tany mankany amin'ny atmosfera rehefa maina be ny tany, amin'ny fahavaratra sy amin'ny andro be rivotra .
Ilay tranokala fanandramana ao Cabo de Gata
Ny toerana nanatanterahana ny andrana dia spartal semi-maina izay ao amin'ny Cabo de Gata-Níjar Natural Park (Almería) izay nanoratan'ny mpikaroka angon-drakitra CO2 nandritra ny enin-taona (2009-2015).
Hatramin'izao, ny ankamaroan'ny zavatra ninoan'ny mpahay siansa dia ny tsy fandanjalanjana ny fifandanjan'ny karbaona an'ny ekosistema semi-maina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny habetsaky ny CO2 izay navoakan'ny fisefoana ny biby sy ny zavamaniry dia novalian'ny photosynthesis. Na izany aza, namintina ity fanadihadiana ity Betsaka ny CO2 miangona ao amin'ny tany ambanin'ny tany ary amin'ny rivotra ivoahana dia avoaka amin'ny rivotra iainana ary miteraka famoahana CO2 fanampiny.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fahalalana ny famoahana CO2 ny rafitra maina mba hahatakarana bebe kokoa ny fifandanjana CO2 manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Ny famoahana CO2 dia voamarika any amin'ny faritra maina izay misy fiantraikany amin'ny tsingerin'ny karbaona